Iprofayili Company - Changzhou Zhanhang International Co., Ltd
Zhan Hang, kukho urhwebo kunye lokuvelisa combo, into zokuqeqeshelwa izixhobo CNC kumatshini, iirobhothi mveliso kunye nophando izixhobo mveliso esizisebenzelayo kunye nophuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa zamashishini ophezulu-zobugcisa.
Iqela lethu ulawulo zobugcisa uneminyaka engaphezu kwe-10 ka robot mveliso kunye namava iimveliso. Iimveliso eziphambili ziquka: CNC lathes, amaziko machining, iirobhothi truss, ngokudibeneyo ingalo robhothi, inkqubo CNC. Products ezinxulumene aerospace, yokunyibilikisa isinyithi, ishishini imoto, zokuthutha, imfundo, unyango, ubunjineli oomatshini, eneji ezicocekileyo, izixhobo umatshini, ishishini zokhuselo kunye nezinye iinkalo.
Ekhangele phambili kwikamva, siya kuzama ukunceda amashishini bakhutshelwe ukusuka "lemveliso" kwi "ukudala", ngokubonelela phambili, yeprekthikhali, izisombululo eyongayo ukuba abathengi ukuba ukudala ixabiso ngakumbi.